संक्रमण बढ्न थालेपछि उपत्यकामा पुनः कडाइ गर्दै निषेधाज्ञा : कहिले देखि ? हेर्नुहोस – Kavrepati
Home / समाचार / संक्रमण बढ्न थालेपछि उपत्यकामा पुनः कडाइ गर्दै निषेधाज्ञा : कहिले देखि ? हेर्नुहोस
संक्रमण बढ्न थालेपछि उपत्यकामा पुनः कडाइ गर्दै निषेधाज्ञा : कहिले देखि ? हेर्नुहोस
admin August 10, 2021	समाचार Leaveacomment 49 Views
काठमाडौँ- काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा फेरि थपिने भएको छ । यसबारे निर्णय गर्न आज काठमाडौँ उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठक बस्दैछ । दिउँसो २ बजे काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बस्ने बैठकले जारी निषेधाज्ञा केही परिमार्जनसहित थप्ने तयारी गरेको छ ।
‘संक्रमण बढ्दै गएकाले अबको निषेधाज्ञा अहिले वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने आवश्यक देखिएको छ,’ ललितपुरका प्रजिअ ढुण्डीप्रसाद निरौलाले भने,’भीडभाडजन्य गतिविधी, तालिम तथा सभाजस्ता क्रियाकलापलाई निरूत्साहित हुने गरीको निर्णय हुन सक्छ ।’
परीक्षासमेत स्थगित भइरहेका बेला अब फेरि केही क्षेत्रलाई सीमित गरेर अघि बढ्ने कि भन्नेबारे छलफल गरेर निर्क्यौलमा पुगिने उनले बताए । यसअघि घोषित निषेधाज्ञाको बुधबार मध्यराति सकिँदैछ । केही दिन यता संक्रमित बढ्दै जाँदा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरु संक्रमितले भरिन थालेका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख १६ देखि जारी निषेधाज्ञा एक महिना यता केही खुकुलो बनाइएको थियो । अहिले विद्यालय, मठमन्दिर, नाइट क्लवलगायतका क्षेत्रबाहेक सबैजसो पसल, व्यवसाय खुला गरिएको छ ।
तर केही दिनदेखि संक्रमण बढेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत शनिबार भिडिओ सन्देश जारी गर्दै तेस्रो लहरको संकेत देखिएको भन्दै अत्यावश्यक नपरेसम्म घरबाट बाहिर ननस्किन आग्रह गरेका थिए ।
Previous OMG’ अनुहार मात्रै मान्छेको अनि शरीर सबै सर्पको जस्तो; भिडियो हेर्नुहोस
Next छोरीको काठमाडौं मृत्यु पछि, धादिङ्गमा बुवा आमाको पनि यस्तो दुखदायी मृत्यु